Yintoni isiphithiphithi: iimpawu, ingozi kunye namacebiso | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 15/06/2022 16:09 | Ukwahlulahlulahlula
Xa uza kuhamba ngenqwelo-moya, kungakhathaliseki ukuba inde okanye imfutshane kangakanani na, kusoloko kukho into eyenza sibe novalo. Ukuba inqwelo-moya iye yalibaziseka okanye yarhoxiswa, ukuba isuke ngesiquphe okanye yahlala, okanye nokuba sibethe amaqhuqhuva ambalwa kuhambo. Iinqwelo-moya ziba nesiphithiphithi xa zihamba ngesiquphe zize ziqalise ukungcangcazela ngokungalindelekanga, yaye ezi ntshukumo zinokubangelwa kukutshintsha kwesantya sokubhabha, kwicala lokuhamba komoya kunye neemeko zemozulu ezahlukeneyo. Noko ke, abantu abaninzi abazi yintoni isiphithiphithi.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela yonke into oyifunayo ukuba uyazi malunga nokuba yintoni isiphithiphithi, zeziphi iimpawu zayo kunye nokubaluleka kwayo.
1 yintoni isiphithiphithi
2 Ziphi kwaye nini rhoqo?
3 Iintlobo zeziphithiphithi
5 Iingcebiso zokujongana nesiphithiphithi
Igama elithi turbulence lithatyathwe kwi-Latin turbulentĭa, ebhekisela kwimeko yokuphazamiseka (ukuphazamiseka okanye ukuphazamiseka). Inqwelo-moya kunokuthiwa ifumana isiphithiphithi xa ihamba ngamandla ngenxa yokutshintsha kwesantya kunye necala lokuhamba komoya. Ukuphazamiseka kwenzeka xa amasuntswana omoya ephazamiseka, ngokuqhelekileyo ngendlela yomoya. Isiphithiphithi sidalwa ziimeko ezahlukeneyo zemozulu.
Ezona zizathu zixhaphakileyo kukubunjwa kwamafu (ngokuchaneke ngakumbi: amafu aphuhla ngokuthe nkqo), izaqhwithi, kunye nedrafti yeentaba okanye imijelo yejethi. I-Wind shear, enye into yemozulu echaphazela ukubhabha, lutshintsho olukhawulezayo lwamandla kunye necala lomoya.
Olunye uhlobo lwengozi olunokufunyanwa ngexesha lohambo lwendiza isiphithiphithi esiveliswa ngokuthe ngqo yinqwelo-moya ngokwayo. Zibakho xa umthamo omkhulu womoya ungqubana namaphiko enqwelo-moya. Kuzo zonke iimeko, abaqhubi baqhuba iimvavanyo kunye no-drills ukulawula nayiphi na imeko evelayo.
Ziphi kwaye nini rhoqo?
Kwiinqwelomoya zasebusuku okanye iinqwelomoya zakusasa, isiphithiphithi asifane senzeke ngenxa yokuba ukuhamba komoya kuhamba kakuhle ngala maxesha emini. Kwelinye icala, ukuba sihamba ngenqwelo-moya emini, sinokuziva sishukuma ebudeni bohambo.
Zikholisa ukwenzeka kwiindawo eziphakamileyo ezisezantsi kuhambo olufutshane oluqhelekileyo, kodwa ezinye iinqwelomoya ezihamba umgama omde azinjalo. Ukuba sibhabha phezu kweIndiya okanye kuMbindi Mpuma, kusenokubakho udushe.
Iindidi ezintathu zeziphithiphithi zinokuchongwa ngokucacileyo:
Isiphithiphithi esingephi: Le yintshukumo encinci ephantse yacingeleka yenqwelomoya enokuthi isenze sime ngxi kwinqwelomoya.
Isiphithiphithi esiphakathi: Le yintshukumo eqikelelwayo, ayisivumeli ukuba sime kwinqwelomoya kwaye sinokuwa.
Isiphithiphithi esiMandundu: Oku kubi kakhulu kwezintathu, indiza iya kuhamba ngendlela yokuba siya kuziva sinamathele kwisihlalo, okanye siya "kubhabha" ngaphandle kwesihlalo.
Isiphithiphithi asiyongxaki enkulu xa kuziwa kukhuseleko lweenqwelo-moya. Kodwa ebusweni bokungaziwa, kuyinto eqhelekileyo ukuba abakhweli bazive besoyika kwaye banesiyezi. Akufunekanga soyike iziphithiphithi kuba iinqwelomoya ziyilelwe ukuba zimelane nezona ziphithiphithi zinobundlobongela. Ukongeza ekukulungeleni ngokupheleleyo ukujamelana nezi ngxaki, abaqhubi beenqwelo-moya banezakhono zokumelana nezidubedube. Ukucotha kunye nokutshintsha ukuphakama kuyinxalenye yaloo nto.
Nangona azichanekanga ngokupheleleyo, ekubeni indalo ayinakuqikelelwa kwaye imozulu inokutshintsha nangaliphi na ixesha, izibikezelo kunye nezivamvo zifakwe kwezinye iikhabhinethi zokubona isiphithiphithi kunye nokuqina kwayo. Ngaphakathi kwinqwelo-moya kukho oothunywashe ababangela ukuba kubekho isiphithiphithi. Umzekelo, izihlalo ezibekwe embindini womxhuzulane kwaye amaphiko enqwelomoya awafane abone olu tshintsho, ngelixa izihlalo ezibekwe emsileni wenqwelomoya yayizezona zinokuzibona. Kwakhona kufuneka sithathele ingqalelo into yokuba inqwelomoya kunye nesitulo esikhulu, siya sibona isiphithiphithi esincinci.
Kanye njengokuba sisebenzisa amabhanti eenqwelo-moya xa sihamba ngemoto, kufanele kube njalo. Kwiimeko ezinzima zemingxuma, amabhanti ezihlalo zinokubusindisa ubomi bethu okanye ziphephe imivumbo ekushukumeni kweenqwelo-moya. Ukuba ungena kwisiphithiphithi, umqhubi wenqwelo-moya uya kukulumkisa ngesandisi-lizwi ngoko kwenzekayo noko kufuneka kwenziwe.
Iingcebiso zokujongana nesiphithiphithi
Ukuba ungomnye waba bantu boyika ukuhamba ngenqwelomoya okanye nangakumbi kwisiphithiphithi, ungakhathazeki, ubabonile ukuba abayongozi kwaye ngokulandela uthotho lweengcebiso uya kukwazi ukujongana nabo ngokuzolileyo kwaye yonwabele inqwelomoya emnandi. Nazi ezinye iingcebiso ezilula nabani na onokuzisebenzisa ukukunceda uhambe ngaphandle kobunzima.
Yiya kwindlu yangasese ngaphambi kokuba uhambe: Eli cebiso linokuba luncedo kakhulu ukuba uhamba kuhambo olufutshane. Yiya kwigumbi lokuhlambela phambi kokuba inqwelomoya induluke ukuze kungafuneki uvuke ngexesha lokuhamba. Ngale ndlela unokukuphepha ukuba nesiyezi xa usenza umthambo omncinci okanye ubambeke kwigumbi lokuhlambela ngexesha lokuqukuqela. Ukuba oku kuyenzeka, bambelela kwisibambo osibonayo ukuphepha ukuwa.
Khetha isitulo sakho: Ukuba kunokwenzeka, khetha indawo yakho yokuhlala. Kwiimeko ezininzi, iifestile zinokukwenza uzive ukhuselekile ngakumbi. Ukuba uyoyika malunga nokubhabha kwakho, kuphephe ukuphuma ngexesha likaxakeka njengoko uvalo lwakho lunokuphazamisa ukufuduka okunokwenzeka.
Ukuqonda isiphithiphithi: Ngokubanzi, sisoyika into engaziwayo, ngoko kuyacetyiswa ukuba wazi ukuba yintoni isiphithiphithi phambi kokukhwela inqwelomoya. Uya kufumanisa ukuba azikho yingozi njengoko zibonakala
Nxiba ibhanti lakho lesihlalo kwaye ugcine izinto ezincinci: Ukuba ungena kwiindlela ezimbi, bhinqa ibhanti lakho ukuze uphephe amaqhuma, ukuwa kunye nesiyezi. Kananjalo gcina izinto zakho zobuqu zikhuselekile ukuze zingabhabhi zimke ukuba inqwelomoya ihamba ngequbuliso.
Ukukhupha amanzi, ukuphazamiseka kunye nokuphefumla: Okokugqibela, khumbula ezi zinto zintathu. Kulo lonke uhambo, hlala u-hydrated kwaye uzame ukuziphazamisa ngomsebenzi othile (unokufunda, ukubukela iimuvi kunye nokuphulaphula umculo). Kwiimeko zoxinzelelo, zama ukulawula ukuphefumla kwakho ukuphepha ukuphakuzela.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuba yintoni isiphithiphithi, zeziphi iimpawu zayo kunye nokubaluleka kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Zemozulu » Ukwahlulahlulahlula » yintoni isiphithiphithi